6 चीजहरू Playa Del Carmen मा गर्न सडकको लागि एक जोडी
6 चीजहरू प्लेआ डेल कारमेन, मेक्सिकोमा गर्न
जुलाई 31, 2019 / एक टिप्पणी छोड
Playa del Carmen संसारको सबैभन्दा धेरै सुन्दर ठाउँ हो। मेक्सिकोको प्रसिद्ध भागहरूमा अवस्थित प्लेआ डेल कारमेन धेरै स्थानीय र विदेशी आगन्तुकहरूको लागि पर्यटन स्थलको रूपमा सेवा गर्दछ। यो केहि उत्तम दृश्यहरू र भव्य चमत्कारहरूको घर हो जुन तपाईं आज देख्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईं यो ठाउँमा गर्न सक्नुहुनेछ। प्लेआ डेल कारमेनमा दुई-चार पटक पछि, मैले तपाईंलाई पहिल्यै सिफारिस गरिएका केही गतिविधिहरू पत्ता लगाएको छु।
यदि तपाईं भविष्यमा यो अद्भुत स्थानको भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो गाईड तपाईंको लागि हो।
प्लेआ डेल कारमेन, मेक्सिकोमा गर्नुपर्ने कुरा
1। एक Cenote मा पौडी
प्लेआ डेल कारमेनमा समुद्र तटहरू सुन्दर छन्। यद्यपि यो उत्तम स्थानहरू होइनन् जहाँ तपाईं पौडी खेल्न सक्नुहुनेछ र केही स्फूर्तिदायी डुबकी पाउनुहुनेछ। यसको सट्टामा, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईंले आफूलाई एक सीनोटेटमा समावेश गर्नु पर्छ।
तर जे भए पनि एक cote के हो? ठीक छ, म खुसी छु कि तपाईंले यस चीजको बारेमा सोध्नुभयो।
तपाईले देख्नु भयो, सेनोटेक भनेको मूल रुपमा पौडी खेल्ने प्वालहरू हुन् जुन लाइमस्टोनको ओछ्यानमा गठन गरिएको थियो। सामान्यतया, यी संरचनाहरूले स्प्रि andहरू र नदाहरूको सिर्जनाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ। प्लेया डेल कारमेनको युकाटान प्रायद्वीपमा, त्यहाँ तपाईं फेला पार्न सक्नुहुनेछ कि असंख्य सिकोट्सको असंख्य। तपाईंले ती मध्ये एक जाँच गर्नुपर्नेछ र पौडी खेल्न पनि कोशिस गर्नु पर्छ!
यस क्षेत्रको सबैभन्दा प्रसिद्ध सेनोटेस मध्ये एकलाई Cenote Azul भनिन्छ। यसको मतलब यो छ कि पानीको शुद्ध निलो रंग छ। यहाँ गोता लगाउँदा निश्चित रूपमा तपाईंको होश ताजा हुनेछ!
2। Xpu हा मा बीचिंग
तपाईं Playa del Carmen मा समुद्र तट को एक धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। छोटो सवारी पहिले नै असंख्य किनारा र स्ट्रिपहरूमा लैजान्छ। जे होस्, मेरो मनपर्ने धेरै recruse Xpu हा छ। यो ठाउँमा पुग्नको लागि तपाईले कार भाँडामा लिनु पर्छ। यो धेरै टाढा छ, तर यो यात्रा को लागी एक इनामदायी ठाउँ हो।
भीड Xpu हा मा मा ठूलो छैन। यसले तपाइँलाई भावना दिन्छ कि यो एक विशेष रिसोर्ट हो। यहाँ, तपाईं डाइभिंग र पौंडी जस्ता धेरै गतिविधिहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यहाँ एक inflatable कश्ती पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं केही डु bo्गा गर्न चाहनुहुन्छ भने। केवल निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग सबै चीजहरू तपाईंकोमा छन् कायाकिंग चेकलिस्ट.
भाग्यवस, त्यहाँ Xpu हाको किनारमा बार र होटलहरू छन्। यस ठाउँको भ्रमण गर्नाले तपाईंको सुविधालाई कहिलै पनि हल्का बनाउँदैन!
3। मन्दिरहरूको अन्वेषण गर्दै
एकले थाहा पाउनुपर्दछ कि विश्वका नयाँ सात आश्चर्यहरू मध्ये एक प्लेआ डेल कारमेनमा अवस्थित छ। विशेष रूपमा, चेचेन इट्जा रहस्यमय र विवादास्पद Mayan खंडहर राख्छ। यो एक सुन्दर गन्तव्य हो कि कसैलाई पनि आउन प्रोत्साहित गरियो।
म्यानका भग्नावशेषहरू निश्चित रूपमा विश्‍वको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू मध्ये एक मानिन्छन् किनभने त्यहाँ भेटिएका बहुमूल्य पुरातात्विक अन्वेषणका कारण। सबै भन्दा पहिले, एक पहिलो मानव सभ्यता यी भग्नावशेषहरूमा बस्थ्यो।
चेचेन इत्जामा म्यान मन्दिरहरू पुग्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ। पछिल्लो ज jun्गलको बीचमा अवस्थित छ, जुन मार्गलाई धेरै छली बनाउँछ। कम्तिमा दुई घण्टा लाग्नेछ तपाइँ पुग्ने ठाउँमा पुग्न अघि यदि तपाइँ टुर बसमा हप गर्नुभयो भने। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं कार भाँडामा पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। केवल तपाईं संग एक गाइड ल्याउनुहोस्!
तर झिक्नु हुँदैन। थकाउने यात्रालाई यस्ता उत्तम दृश्यहरूले पुरस्कृत गर्दछ।
4। फूड-हपिंग मा ला पर्ला पिक्सन कुइजिन
यदि तपाईं एक प्रामाणिक मेक्सिकन पकवान चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले ला पर्ला पिक्सन कुइजिन भ्रमण गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ। यहाँ प्रस्तुत गरिएको सबै चीजको स्थानीय स्वाद हुन्छ, तर स्वाद निश्चित रूपमा विश्वस्तरीय हुन्छ। त्यहाँ धेरै भव्य व्यंजनहरू छन् जुन तपाईं यस रेस्टुरेन्टमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं केहि परम्परागत म्यान व्यंजनहरू पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ!
रातको समयमा यस रत्नमा जानु उत्तम विचार हो। उत्कृष्ट खाना बाहेक, यसले तपाईंलाई आरामदायी र रमाईलो एम्बिएन्सन पनि दिन सक्दछ। त्यहाँ ला Perla मा साँझ प्रदर्शन छन् कि तपाइँ एक स्वागत भावना दिनु पर्छ!
यदि तपाईंसँग कडा पेट छ भने, तपाईं तिनीहरूको व्यञ्जनहरूमा लिप्त हुन सक्नुहुन्छ जुन मुख्य सामग्रीका रूपमा फोहोरहरू छन्। तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि यी व्यञ्जनहरू कत्ति स्वादिष्ट हुन्छन्।
5। रियो Secreto काभर्नमा गुफा
होईन, कसैले रियो सेक्रेटोका गुफामा लुकेका आश्चर्यहरू कहिल्यै छुटाउनु हुँदैन। यो एक अनियन्त्रित गुफा हो कि एक अद्वितीय ईकोसिस्टम प्रदान गर्दछ जुन साक्षी दिन योग्य छ।
यो पनि ध्यान दिईन्छ कि गुफा भित्र पौडनु सम्पूर्ण सम्भव हुन्छ। यद्यपि मैले यसलाई चलाएको छैन, त्यस्तो गतिविधि अझै पनि भाग लिन लायक छ। केही स्प्रिंग्स र नदीहरू गुफा भित्र भित्र बग्दछ। केवल एक वेटसूट ल्याउनुहोस्, र तपाईं पहिले नै गुफाको आरामदायी पानीको मज्जा लिन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, त्यहाँ गाईडहरू छन् जसले तपाईंलाई पौडी खेल्न सहयोग पुर्‍याउँदछन् ताकि तपाईं कहिल्यै हराउनुहुन्न।
6। पुन्टा एसमेरेल्डामा एस्केप्याडि।
मेरो अनुभवको आधारमा, Playa del Carmen मा समुद्री तटहरू द्रुत रूपमा भर्न सक्दछ विशेष गरी पर्यटक मौसममा। जबसम्म तपाईं एकान्त किनारहरूमा जानुहुन्छ, तपाईंले धेरै भीडसँग काम गर्नुपर्नेछ।
भाग्यवस, यस भविष्यवाणी को लागी एक भाग छ। केवल उत्तर तर्फ पुग्नुहोस् जब सम्म तपाईं पुन्टा एसमेरेल्डा पुग्न सक्नुहुन्न। पछिल्लो अझै पनि उच्च-गुणवत्ताको समुद्र तट हो, तर कम मानिस र व्यावसायिक गतिविधिहरू भइरहेको छ। तपाई यहाँ सँधै आराम र सहज महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई समुद्रीतटमा भोज र रमाईलो गर्न चाहानुहुन्छ, त्यहाँ केहि मानिसहरु छन् जुन तपाईलाई देख्न सक्दछन्।
पुन्टा एसमेरेल्डामा कुनै क्लबहरू छैनन्। जहाँसम्म, त्यहाँ समुद्री तटहरूको गुच्छा छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको जीवनको समय दिन सक्दछ। यहाँ एक कोनोटे पनि छ। यो स्थानमा पुग्ने बित्तिकै तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि प्लेया डेल कारमेन प्राकृतिक आश्चर्यको आश्रय हो।
वास्तवमा त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईं Playa del Carmen मा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ उल्लेख गरेका कुराहरु केवल कथाको आधा मात्र हुन्। एकचोटि तपाईंले यस ठाउँको भ्रमण गर्नुभयो, तपाईंलाई धेरै रमाइलो र रोमाञ्चकारी गतिविधिहरू प्रस्ताव गरिनेछ। तपाईं यस मेक्सिको मा अद्भुत पर्यटन गन्तव्य मा संलग्न के गर्न को लागी सीमा छैन!
त्यसोभए तपाई केको लागि पर्खिरहनु भएको छ? अब स्थानको भ्रमण गर्नुहोस्!
श्रेणी: क्यारिबियन, मेक्सिको, उत्तर अमेरिका, यात्रा योजना टैग: cenote, मेक्सिको, playa del carmen, यात्रा योजना
←4शानदार अस्ट्रेलियाई टापु गन्तव्यहरू तपाइँ सजीलै मिस गर्न सक्नुहुन्न
आयरल्यान्ड ड्राइभिंग सल्लाहहरू - तपाईंको रोड ट्रिपमा सुरक्षित ड्राइभ कसरी गर्ने? →
मलाई सूचित गर्नुहोस् जब नयाँ टिप्पणीहरू थपिन्छन्।
नि: शुल्क र सस्ता कुराहरू बार्सिलोनामा गर्न